Dir Era: 30/10/2005
# posted by Dir Era @ 1:47 AM 0 comments
HA LA JOOJIYO BEESHA HORORKA AH
Koofurta Soomaaliya waxay ka koobantahay 12 gobol, hadddii laga reebo gobolka Banaadir, gobolada kale mid walba waxaa dega oo lagu ixtiraama beelo qaas ah, beelahaas oo haddana u kala dega degmo-degmo gaar ah, sidaas daraadeeda beel walba oo Soomaaliya ka mid ah waxay leedahay gobollo iyo degmooyin lagu yaqaanno laguna tilmaamo degaankeeda iyo meesha ay u badantahay beeshasaas. Beel walba waxay leedahay degmadeeda mise tuulooyinkeeda u gaar ah oo ay ku yaallaan hantida maguurtada ah ee beeshaaas, waxay leedahay daaqeeda iyo ceelasheeda u gaar ah. Beel kastana intaas aya lagu aqoonsanyahay laguna ixtiraama.
Inta ay jiraan lana ilaalinayo aqoonsiga iyo ixtiraamka beel walba ay ku leedahay deegaankeeda Soomaaliya kama dhacaan dhibaatooyin keena isku dhac beeleed. Soomaalida, inta miir-qabka ah waxay weligeed ku dadaalijirtey is-xaqdhawridda beelaha si loo ilaaliyo xasiloonida iyo nabadgeliyada deegaanka.
Ha-yeeshe way jiri-jireen marar badan beelo oo intuu miir-qabkoodii yaraado damco inay ku xadgudbaan deegaanka beelo kale, arrintaasna waxay sababa-jirtay isku-dhac beeleed oo dhaliya dagaallo u dhiiga badan ku daato,
waxaana dhici jirtey in kaddib markii dagalladaas ay dad iyo hanti badan kaga hoobtaan labada dhinac, haddana si caadada ahayd markii la dhexgalo beelaha is dilaya, lana joojiyo dagaalka, xaaladda waxay ku soo noqonjirtay sidi ay ahayd ka hor intaysan dhicin dagaallada, taasoo ah in beel walba ay ku soo hari jirtey deegaankeeda lagu yaqaannay, waxyna sidaas dhici jirtey kaddib markii u dhiig badan daatay, oo hanti badan bur-burtay. Labada beelood oo dagaallamay tan gardaran iyo tan laga gardarranyahayba, mid walba waxaa u badanjiray qabuuraha, agoonta, asayga, waxaa ka sii yaraada xoolaha, ha-yeeshee wax fa'iido ah uma kordhi-jirin. Arrintana waxay ku soo harijirtey jug-jug meesheeda ha joogto.
Dagaaladaan kor ku xusan oo ka dhex dhaca beelo deris ah, mise deegaan ahaan isku dhaw, waxaa badi ahaan ka dambeeya oo kiciya dagaalka shaqsiyaad fidni-wadayaal ah oo aqli gaaban.
yeeshee kuwa kiciya daagalladaan o sida an so sheegnay ka dhex dhaca beelo deegaannadooda ay isku dhawyihiin waxaa ka sii daran oo ka shar badan kuwa intay beelahooda hubeyaan kana tegaan gobolkii uu deegaankooda ka tirsana kuna duula gobollo kale oo ka sii fog oo waxba aysan ku lahayn waxna ka oollin waana kuwaas kuwa maanta shidaya dabka ay Soomaaliya ku gubanayso, waxayna doonayaan inay wada qabsadaan gobollada Soomaaliya oo idil. Waxay ku doodayaan in gobol walba ay.
ayaga leeyihiin mise an laga xigin. Koofur Soomaaliya haddii laga reebo gobollada Bari iyo Nugaal, ma jiro gobol aysan ku duulin oo aysan qabsanin, ilaa haddeerna waa duullaan, waa ayaga kuwa dabada ka wada dagaallada ka socda Bay iyo Bakool, waa maleshooyinkooda kuwa haddeer qaska ka wada gobolka Jubbada Hoose, waxayna rabaan inay wada qabsadaan min gobollada dhexe (Mudug-Galgaduud) ilaa Dhoobley oo ah xaduudka Kenya.
Cabdi-Qaasim Salaan, Xasan Daahir Aweys, Yusuf Indhacadde, e Cabdi-Rashiid Ilqeyte waxay mid-mid ahaan mid walba uu si caddaan ah horey u shegeeay inay ayaga beel ahaan ay leyahiin gobolka Sh.Hoose, iyo in gobollada Jubbooyinka in an laga xigin. Ragga kor ku xusan oo ku hubeyey mooriyaanta beeshooda hantida ay ka helaan deegaanka ay haystaan sida Sh.Hoose, waxay doonayaan inay xoog ku qabsadaan kuna si haystaan ilaa Dhoobley si ay gacanta ugu dhigaan beeraha Jilib iyo Jamaama ujeeddaddooda xigtana waa degedda Kisimaayo. Haddaba Soomaali weyn, iyo Dawladda haddeer dhisan haddii aysan iska qabanin intii goori-goor tahay kooxdaan hororka ah iyo beeshodaba, waxaa xaqiiqa ah in Soomaaliya ay qabsandoonto hal beel kuna soo rogidoonto waddanka oo idil nidaam ku dhisan fowdo iyo fool xumo sida haddeer ka jirta gobolka sh. Hoose oo u xoogga ku haysto Indhacadde.
Beelaha dega Sh.Hoose oo degaankooda xoogga ay ku haysato moriyaanta Indhacadde way ku tala jiraan inay iska kiciyaan gumeysiga Habargidir oo ka sii fool xun kana naxariisdaran gumeysiggii gaalada.
Cabdi-Qaasim, Xasan Daahir A. iyo Indhacadde iyo morayaantooda way ka sii arxandaranyihiin gaalada gumeysanjirtay Soomaaliya, waana in layska qabta.
Cabdi-Qaasim iyo raggiisa waxay mar walba soo hadal qaadaan Diinta iyo Shareecada Islaamka ayagoo sidaas ku muujinayo munaafiqnimo weyn iyo been ka sheegid Diinta iyo Shareecada madaama ay doonayaan inay gabbaad ka dhigtaan Diinta si ay u si wataan haysashada gobollada beelaha kale iyo boobka hantida beelahaas.
Dawladdaan dhisan waa inay hal arrin ogaata, taasoo ah in haddii gacan deg-deg ah la siinin shacabka Sh.Hoose si ay isaga saaraan moriyaanta Habargidir inay si weyn u adkaanayso in moriyaanta beeshaas hororka ah laga soo saaro meelaha kale oo ay ka amartaagleeyaan, sida Jubbooyinka, maxaa yeelay Habargidir SH.Hoose waxay ku haysata wax kasta oo ay u baahanyihiin ciidamo dagaallamaya waxay ku haysata biyo iyo baad, waxay ku haystaa bad wax laga soo dejiyo, waxay ku haystaa dad la baado, intaasna waxa ka sii daran waxay haystaa waddada istratejiyada ah oo isku xirta Xamar iyo Jubbada Hoose, waddadaas istratejiyada ah waa tan suuragelisay in maleshooyinka uu hoggaamiyo Gobaale ku noqdaan Barre Hiiraale laf dhuun gashay.
Ilaa intaankor ku xusan ay ku jiraan gacanta Habargidir Somaaliya inteeda kale waxay khatar u tahay inay gacanta u gasho beshaas damaca badan.
Marka waa lama huraan, si Soomaaliya nabad u hesho in la joojiyo dhul ballaarsiga ay wadaan ragga ay madaxda u yihiin Cabdi-Qaasim iyo Daahir Xasan Aweys iyo beeshooda. Si taasi ay ku suuragashana waa in marka hore la xoreeya Sh.Hoose, maxaa yeelay waa gobolkaan meesha ay Habargidir wax walba ku haysato, waana gobolkaan meesha ay ku xirantahay awoodda dagaaleed ee Beeshaas.
Cabdi-Qaasim iyo kooxdiisa madaama ay yihiin reer Mudug mid way wada ogyihiin taasoo ah inaysan Soomaaliya weli uga dhicin in beel xoog ku qabsato kuna waarto deegaan beel kale leedahay.
Haddaba Shabeellaha Hoosewaa sidaas oo kale, Habargidir inkastoo ay xoog ku qabsatay haddana haba noqotee kaddib markuu daato dhiig badan Habargidir kuma waaridoonto Sh. Hoose waa laga soo saaridoonaa Bi'idmi-Laahi Kariim, dhiigga daadandoonana waxaa masuuliyadiisa aduun iyo aakhiraba qaadidoonta beesha deegaan boobka wadda.
Cali Cumar: sablaale1@hotmail.com
Rayigaa waxaa ka musuul ah qoraaga, shabakadda jammaame.com waxay diyaar u tahay inay soo bandhigto qof walba aragtidiisa uu xorka u yahay..oo keli..
# posted by Dir Era @ 1:00 AM 0 comments